Corporate Kiredhiti FAQs Zvekuita uye Maitiro ekuti uwane Bhizinesi Mari
Chii chinonzi Corporate kana Bhizinesi Kiredhiti?
Kana Ini Ndikavaka Bhizinesi Chikwereti, Inogona Sei Kubatsira Kambani Yangu?
Nei Ndisingafanirwe kushandisa Yangu Yemunhu Kiredhiti Mbiri Yebhizinesi Rangu kana Corporation?
Ndezvipi zvinhu zvinoitwa nemamwe Makambani kana Masangano Ekukweretesa muKambani kana Bhizinesi Chikwereti Mbiri?
Ndiani Anobhadhara Chikwereti changu Chemubatanidzwa?
Ini ndinowana sei yangu Corporate Chikwereti Chiyero Kuvandudza?
Kambani Kiredhiti, kana Bhizinesi Kiredhiti, chikwereti chinowanikwa uye chinopihwa kukambani kana bhizinesi kwete munhu mumwechete. Ichi chikwereti chakakosha mukumisikidza nekuchengetedza hukama hwebhizinesi kana hwebhengi nevanogona kukweretesa, vatengesi, vezvemabhizimusi, kana kunyange vatengi. Izvi zvinodaro nekuti "nhoroondo yechikwereti" yakagadzwa nemasangano akasiyana siyana ekuzivisa nezvechikwereti, uye anotevera makero ratidziro, akavakirwa pane yako yapfuura uye yazvino nhoroondo yechikwereti, pakati pezvimwe zvinhu zvakakosha. Iyi nhoroondo uye ratidziro sisitimu inoshandiswa nevanogona kukweretesa, vatengesi, vatengi, kana vanobatana mubhizinesi kuyera kuti kambani yako yakavimbika zvakadii uye kana kwete kana kuwedzera chikwereti kukambani yako, kana kuita kambani yako mubhizinesi rehukama. Hukama uhwu hunogona kunge huri kukweretesa mari yekushandisa kukambani yako kana mubatanidzwa, kubhadharisa midziyo, kupa michina, nezvimwewo.Kuumba Kambani Kiredhiti uye kuichengeta kwakakosha kuhutano nekugara kwenguva refu kwebhizinesi rako, uye zvine pesvedzero huru munzira iyo kambani yako iri inoonekwa nedzimwe nyika dzebhizinesi.
Zvakanakira kuve nekumisikidza Kambani Kiredhiti renji kubva pazvinhu zviri nyore zvekushandisa, nzira yese kusvika pakubvumidza kambani yako kumira kuongororwa kubva kune anogona mutengi uyo anogona kuyera kuvimbika uye kugona kambani yako nekugona kwako mbiri kiredhiti.
Kubva pamaonero ekushanda, kumisikidza Kiredhiti Kiredhiti kunokutendera iwe kuti uite zvinhu zvakadai sekutenga zvekushandisa, kubhadhara zvikwereti, kuchengetedza zvivakwa, kubhadhara vamwe vashandi, kubhadhara kuderera kana kukwira mubhizinesi, nezvimwe, pasina kupedza zvakakosha mvura midziyo. Kana iwe ukagadzira bhizinesi kiredhiti iwe uchave uine chokwadi chekuti rako bhizinesi rine kugona kupindura nekukurumidza kune zvemusika zvinoda kana kukura. Semuenzaniso, nepo kuwedzera kwemirairo kana bhizinesi kuchiwanzo kuve chinhu chakanaka, kuve nenzvimbo yakakodzera yechikwereti kubvumidza kambani yako kupindura pazvikumbiro zvakadaro nekufambisa kuwedzera kwesimba rekushanda pasina "kumberi mari" ichaenda kure kuve nechokwadi chekupindura zvirinani kuwedzera. Mamwe mabhenefiti anosanganisira iyo yekuti mazhinji anokweretesa masangano, vanopa mareesi, nezvimwe, vanoisa yavo mitero yezvibereko pane izvo Bhizinesi Chikwereti Mbiri uye chiyero chiri chekambani yako. Kuva nechikwereti chakamisikidzwa kunogona kutungamira mukuchengetwa kwakakura mumitero yezvibereko uye zvakanyanya kunaka mareisi uye mareti echikwereti.
Uchishandisa yako pachako mbiri yechikwereti, inozivikanwawo seako "Mutengi Wechikwereti Mbiri," panzvimbo yekumisikidza yakakodzera Bhizinesi kana Kambani Kiredhiti ipfungwa yakaipa kumativi mazhinji. Zvakawanda sekuvimbisa chero zvikwereti zvemakambani kana zvikwereti pachezvako, kana "kubatanidza" mari yemubatanidzwa neyemunhu kana zvinhu, kushandiswa kweako wega Consumer Chikwereti Mbiri yekubatsira kana kushanda kwekambani kunogona kutungamira kune "shandura-ego" kutsunga nemasangano anotonga kana ezvemari, uye kuboorwa kwechidzitiro chekambani. Izvi zvinogona kuisa njodzi pazvinhu zvemuridzi uye zvinoita kuti muridzi kana varidzi vapiwe mutoro wakanangana nezvirango kana kubhadharwa kwezvikwereti zvakawanikwa nekambani kana mubatanidzwa. Iri rinogara riri zano rakanaka kuvaka kiredhiti bhizinesi pane kusiya fomu yemakambani kuburikidza nekubatana kwemari - uye izvi zvinosanganisira "kubatanidza" maprofiles echikwereti.
Kumwe kukanganisika kwekushandisa yako Consumer Kiredhiti Mbiri panzvimbo yeiyo chaiyo Bhizinesi kana Kambani Kiredhiti inyaya yekuti kushandiswa kweako wega kiredhiti pakushanda kwekambani kunogona kuperekedzwa nemhedzisiro chaiyo yekuita kuti kambani yako iratidzike zvisina kukwana mari kana kushanda, kana inogona kukanganisa zvisizvo kuti rako bhizinesi kiredhiti harina kugadzikana, risingavimbike, kana rakawandisa. Izvi zvinowedzerwazve nenyaya yekuti kune mitemo yakasiyana uye zvisarudzo zvekupa chikwereti chevatengi, uye izvo zvingave zvakajairika uye zvinogamuchirwa kuCorporate Kiredhi Mbiri, senge mafomu mazhinji echikwereti izvo zvinowanzoitika nyaya ye bhizinesi, inogona kukanganisa maitiro eCustomer Chikwereti Mbiri.
Kune akatiwandei ezvinhu anoumba kambani kiredhiti kodhi, asi iwo anogona kupfupikiswa neakakosha mashoma mapoinzi. Izvi zvinhu zvinotorwa mukufungisisa nevanogona kukweretesa (masangano anokweretesa, mabhangi, nezvimwewo), uye zvakare nevangangodaro vatengesi uye kunyange vatengi vasati vafunga kupa chikwereti, kuwedzera chikwereti, kana kuita kambani yako mubhizinesi rebhizinesi.
Izvi zvinhu zvinotevera.
Assets: Ichi ndicho chiyero chakakosha kwazvo. Ndeipi kambani yako yakakosha? Kambani yako ine capital kana liquid zvinhu kuti ubhadhare? Yakagwinya sei bhalanzi sheet? Yakawanda sei inoshandisa capital yayo? Ichi chingangodaro chiri chakanyanya kukosha uye chinowanzo fungwa sechinhu kana uchifunga kuti kambani yako kana mubatanidzwa wakakodzera chikwereti.
Ability: Ko bhizinesi rako kana kambani inogona kubhadhara zvikwereti zvayo? Iyo kambani yako yakavimbika sei kubhadhara zvikwereti zvayo munguva yakapfuura? Kubhadhara kwacho kwaive panguva yakafanira here? Imarii yakapihwa kukambani yako? Naani? Yakaita chikwereti chakadii? Pane here akatanhamara kana asina kushandiswa mitsara yechikwereti? Yese mibvunzo iyi inoita basa rakakosha mukukweretesa kusarudza nezvekambani yako kukwanisa kubhadhara zvikwereti zvayo.
Acumen: Inguva yakareba sei kambani yako yanga iri mubhizinesi? Bhizinesi rako rakagwinya sei? Zvinoitwa sei? Ndeupi rudzi rwemagariro ehupfumi uriri kushanda mariri? Icho chiri muchikamu chiri kudzikira (funga manyorerwo epaipureta mukutanga kwema90's)? Iko stock irikuita sei? Inoshandisa vanhu vangani? Iko kune yakakosha nhamba yekutonga kana nhema kune iyo? Inoburitsa pachena zvinhu izvi here? Kugona kwebhizinesi rako kugara mubhizinesi zvakare chinhu chakakosha kwazvo icho chinotariswa nevamwe kana iwe uchiyedza kumisikidza bhizinesi kiredhiti.
Kune maFemu akati wandei anoteedzera Kiredhiti Kiredhiti uye mamwe ma "Bhizinesi Hodhi Zviratidzo." Kunyangwe ese maFemu aya achishandisa nzira dzakasiyana siyana dzekudyidzana uye "mamakisi" ekuyera makambani, ivo vese vanounganidza yakawanda yakafanana ruzivo.
Iwo maFemu anowanzo bvunzwa kuitira kuti aongorore makambani kana bhizinesi reCredit uye Risk profiles anosanganisira:
Dunn naBradstreet (D & B ™)
Bhizinesi Chikwereti USA ™
Mamwe emaFemu aya anoshanda mumabhizimusi madiki, mamwe munzvimbo yakazara, asi zvakakosha kuti iwe uzive nzira dzavanoshandisa pakuyera kana kuferefeta kambani, uye kuti unovavarira kuzadzisa nzira dzakakodzera kuti uchengetedze kana kuvandudza Corporate yako. Chikwereti Chiyero.
Nguva dzese iwe paunobhadhara nenguva, kukambani kana bhizinesi iro pacharo rakatarwa nechero ipi yeFirms yataurwa pamusoro, rekodhi iri kuitwa mune yako mbiri kiredhiti. Izvo zvakakosha kuti bhizinesi raunotarisana naro rimhan'arewo kumasangano akasiyana siyana sezvo izvi zvichisimbisa kuti zviitiko zvako, uye kubhadhara, zvakanyorwa nenzira kwayo.
Chengetedza chikwereti chako. Izvi zvinoreva kuti iwe unowana chete chikwereti chakawanda sezvaunoda oparesheni, uye kuti iwe unochengeta tabo pane echikwereti mitsara uye imwe chikwereti-mari. Iyo inowedzera chikwereti kambani yako, inowedzera mari kana mari yainofanira kunge iine kuitira kuti irege kukanganiswa zvisirizvo muCredit Mbiri yako. Zvikwereti zvakawandisa, kana zvakawandisa zvingangoita mari yechikwereti zvinogona kukanganisa kukanganisa kwako chikwereti.
Chengetedza Yako Yega Mutengi Chikwereti Mbiri mune kumira kwakanaka. Kunyangwe iyo Mutengi uye Corporate Kiredhi Profiles akasiyana zvachose uye asingafanire kuve nehukama kune mumwe nemumwe, vangangozopa kana vanopa zvikwereti vanogona kunyatsoongorora mutengi chikwereti chimiro chevaridzi (s) kuitira kuti vatange bhizinesi chikwereti kukodzera. Kuve neako Mutengi Kiredhiti mukumira kwakanaka kunogona kukanganisa maitiro ako eCorporate Kiredhiti Kukosheswa kunoonekwa. Ridza chinzvimbo chinoshanda mune yako Mbiri. Izvo zvakakosha kuti iwe unyatsoongorora, uye utambe chinzvimbo chinoshanda mukuchengetedza yako mbiri kiredhiti. Gadzira mishumo yenguva dzose kune yako nhoroondo, ipa zvese zvaunogona, uye uve nechokwadi chekuti chero zvakapinda mumushumo wako ndezvechokwadi. Izvo zvakare chiyero chakakosha kuenzanisa uye kusiyanisa yako mbiri nemamwe makambani kana makambani akafanana neako kuti uone kuti zvii zviri kuitika, kwaunowira muboka iro, nezvimwe.
Tsvaga zano rehunyanzvi. Paunenge wagadzirira kutamba chinzvimbo chekumisikidza kana kugadzirisa chimiro chako, bvunza nyanzvi dzakaratidza marekodhi enzira munhandare iyi. Ivo vanozoziva nzira yekufamba kuburikidza nedzimwe nguva dzakasviba mvura dzinogona kutungamira mukuvandudza chikwereti kukodzera uye yakakodzera Corporate Kiredhi Mbiri kune rako bhizinesi.
Izvo hazvina kukwana chero zvimwe kungova neCorporate Chikwereti Mbiri. Kuti ugare kumberi kwepakeji mumisika iyi inokwikwidza, kuumba yakanaka inofungidzirwa bhizinesi rechikwereti, nekuvandudza kumira kwayo, inogona kubhadhara mibairo mikuru iwe nekambani yako.
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa munaNovember 8, 2019